Vibhavadi Hospital Myanmar | The best hospital in Myanmar from Thailand
Better medicine for families
Bright mindsand medicine
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများ၊စက်ကိရိယာများနှင့် အတူ
ကျွန်မတို့၏ Vibhavadi International Hospital-Yangon Office (ဝိဖဝတီဆေးရုံ ရန်ကုန်ရုံး) ကို 1/6/2020 နေ့မှစ၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။
COVID-19 အတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်
COVID 19 အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲ
လျော့ဈေး နှင့် ဈေးနှုန်းများ
၀ိဖ၀တီဆေးရုံသည် “ဖော်ရွေပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဆင့်အတန်းမြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမည်ဆိုသော” ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည့် ISO 9001 လက်မှတ်၊ Hospital Accreditation နှင့် Joint Commission International (JCI) တို့ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။
The Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation (HQIA) သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေမည့်ဆေးရုံများ၏အာမခံချက်ကိုသေချာစေသောနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဝိဖဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီး၏ အရိုးအကြောအဆစ်ဆိုင်ရာ ကုသသောဌာနတွင် လူကြီးများအတွက်သာမက ကလေးသူငယ်များအတွက်ပါ အကောင်ဆုံး ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ အရိုးအကြောအဆစ်ဌာနသည် လူနာများအား နွေးထွေးမှုရှိသော သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိစေရန်အာမခံပါသည်။
ကလေးရရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသောဇနီးမောင်နှံများ ၏အခက်အခဲကိုသေချာစွာနားထောင် ၍တစ်ဦးချင်းအလိုက်သင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရှာဖွေကုသပေးပါသည်။လူနာအားလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များအချိန်နှင့်တပြေးညီပေး၍ဖန်ပြွန်သန္ဓေလုပ်ဆောင်မှုကိုချောမွေ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။
Call us and book appointment 09954562222
Please call 09 954562222 if urgent. Your personal case manager will ensure that you receive the best possible care.
Select Departmentကျန်းမာရေးဆေးစစ်မှုကလေး ဌာနကလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုစစ်ဆေးသော ဌာနပန်းနာရင်ကြပ်နှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းသွားနှင့်ခံတွင်းဌာနနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဌာနမျက်စိရောဂါ ဌာနဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ဌာနအထွေထွေရောဂါကုဆေးပညာဌာနဟော်မုန်းဌာနအသည်းအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဌာနသွေးရောဂါဌာနကျောက်ကပ်ရောဂါဌာနကင်ဆာဆေးသွင်းဌာနနှလုံးအထူးကုဌာနကျောက်ကပ်ဆေးဌာနစိတ်ရောဂါကုဌာနဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဌာနအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှု ဌာနသားဖွားနှင့်မီးယပ်ဌာနအရိုးအကြောအဆစ် ဌာနဆီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ဌာနရင်သားဌာနကျောရိုးဆစ်အထူးကုဌာနအရေပြားနှင့်လေဆာဌာနထိုင်းရိုးရာအနှိပ်အူသန့်စင်ခြင်းအပ်စိုက်ကုဌာန
No. 80 C / kyaik Wine Pagoda road, Mayangone tsp, Yangon, Myanmar